Owona maBroker alawulayo eCySEC ngoMeyi 2022 | Isikhokelo esipheleleyo sokuFunda 2 soRhwebo
AbaGqwetha abagqwesileyo be-CySEC bango-2022
Ngokukhetha umthengisi olawulwa ngokupheleleyo, njenge Umthengisi weCySEC, uzenzela umnatha wokhuseleko wakho kunye nenkunzi yakho. Abarhwebi banokulahlekelwa yimali xa betyala imali, oko kulindeleke kulo mdlalo. Kodwa xa kuziwa ekukhetheni a umrhwebi, kubalulekile ukukhetha enye enelayisensi epheleleyo.
Ehlabathini jikelele kukho amawaka wabarhwebi abakwi-Intanethi, umntu ngamnye enikezela ngeenkonzo zakhe nakwinani le-vaster labatyali mali. Ingxaki kukuba kukho inani elixhalabisayo labakhwabanisi phaya abalinde ukukrazula abathengisi abangalumkanga.
I-CySEC ibambelela kuyo yonke imigaqo ebekwe yi-MiFID (kwiMarket kwi-Directive Instrument Directive). Ngaphandle kwemithetho ye-MiFID, abarhwebi ngekhe bakhuseleke kwizinto ezinje ngezemali zabanqolobi, ubuqhetseba besazisi, ukuxhaphaza imali kunye nobusela.
Kweli phepha, siza kudlula kuzo zonke iimetriki eziphambili ekufuneka uziqaphele xa ukhangela umthengisi we-CySEC onokurhweba naye. Sigubungele yonke into ukusuka kwinto eyenziwa ngumbutho olawulayo ukuya kwinto onokuyirhweba ngolu hlobo lomthengisi. Ukugqiba, siza kuxubusha kakhulu abathengisi abagqwesileyo be-CySEC ka-2022.
I-CySEC imele 'iKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano yaseCyprus' kwaye yayiyegunya lokuqala lolawulo kwicandelo lezemali kwi-Intanethi. Lo mbutho ulawula usekwe eCyprus kwaye unomdla- lelona ziko likhulu likarhulumente elilawulayo iinketho yokubini kwaye Abarhwebi be forex. Kukho okuninzi abathengisi kwindawo ye-Intanethi abanelayisensi yalo mzimba.
Kwi-2004, iRiphabhlikhi yaseCyprus yajoyina i-EU. Kananjalo, izinto zaqala ukutshintsha kwiimarike zemali. Kwi-2008, iMiFID yaziswa yiPalamente yaseYurophu ngeenjongo zokuvumelanisa imigaqo elawula indawo yeenkonzo zezemali kwilizwekazi. Oku kuvisisanise bonke ababoneleli beenkonzo zezezimali nokumisela imigangatho ekufuneka ithotyelwe.
Usenokuba uqaphele ukuba abanye abathengi be-Intanethi banamalayisensi kuzo zombini i-CySEC kwaye i-FCA (iGunya lokuZiphatha kwezeMali), ngelixa ezinye zibhalisiwe kwenye okanye kwenye. Njenge-FCA, iCySEC inoxanduva lokukhupha iilayisensi kwimibutho yabarhwebi. Eli ziko likwanalo negunya lokohlwaya kwaye liwohlwaye nawaphi na amaqonga angayilandeliyo imigaqo.
Yonke into eyenziwayo eyenziwa ngumthengisi weCySEC ijongisiswe ngokupheleleyo, kubandakanya ukurhoxiswa kunye nokufakwa kwemali phakathi kwabatyali zimali kunye nenkampani yomrhwebi. Abarhwebi beCySEC nabo kufuneka bangenise uphicotho-zincwadi lonyaka, kodwa ngaphezulu koko kamva.
Eyona njongo iphambili ye-CySEC kukwenza intengiso yezemali elawulwayo nenobulungisa kuye wonke umntu. Umzimba ujolise ikakhulu kwiimarike ezisemthethweni ezinje nge-forex, ii-CFDs, kunye ne-OTC (ngaphezulu kwekhawuntari) yorhwebo.
Yeyiphi imiqathango abaHlanganisi abaDibana nayo yokuVunywa kweCySEC?
Kubarhwebi beCySEC, ukufumana ilayisensi akukho lula ngakumbi. Emva kwayo yonke loo nto, kukho uluhlu olubanzi lwezikhokelo ekufuneka zilandelwe. Ezi ziindaba ezimnandi ukuba ungumtyali mali, kuba uya kwazi ukuba umrhwebi onelayisensi kuye kwafuneka aqinisekise ukubaluleka kunye nokulunga ngaphambi kokuba athathe abathengi.
Eli ziko lilawulayo lifuna ubuncinci abalawuli ababini ukuba basebenzise iarhente yomthengisi. Kananjalo, ii-cySEC brokers ziyafuneka ukuba zinxibelelane nomlawuli ukuba uzimisele ukubonelela ngeenkonzo ezongezelelweyo.
Ngamanye amagama, yonke imiba yeqonga lomthengisi kufuneka ihlolwe kwaye ilawulwe ngaphambi kokuba inikezelwe njengemveliso eluntwini. Kuya kufuneka siyiqaphele into yokuba umntu omnye akavumelekanga ngokusemthethweni ukuba abe ngumlawuli wenkampani ethengisa urhwebo. Oku kongeza enye into ekhuselekileyo kwinzame zokurhweba.
Abarhwebi abanamaphepha-mvume kufuneka babeke izicwangciso zabo ngqo kumzimba onephepha-mvume kubandakanya neakhawunti eneenkcukacha zazo zonke iinkonzo zemali inkampani eceba ukuzithengisa.
I-AML sisichazi esithi 'Ukuchasana nokuChithwa kweMali', ngelixa i-CFT imfutshane xa isithi 'Ukudibanisa ukuxhaswa ngezimali kobunqolobi. Zombini ezi zinto zenza isebe elinye kwaye eli candelo linoxanduva lokujonga ukuthotyelwa kweCySEC.
Oku kuthetha ukuba i-CySEC brokers kufuneka ihambe ngenkqubo ye-KYC (Yazi umThengi waKho) kunye nomthengi ngamnye obhalisileyo. Ngenxa yoku ukungazi, oku kubandakanya ukufumana isazisi sokufota, igama elipheleleyo kunye nedilesi yendawo yokuhlala, kunye nemeko yezemali yomthengi kunye nembali yorhwebo. Imithetho efanayo iyasebenza kuyo yonke ibhodi- ke ayinamsebenzi ukuba ungubani, kuya kufuneka ubonakalise ukuba ungubani na phambi kokuba naliphi na iqonga lomthengisi leCySEC likubhalisele iakhawunti.
Ukuba umthengisi weCySEC unokufumana nayiphi na into ekrokrisayo njengokunyanzelwa kwezixhobo zemali, ukurhwaphiliza imali, imali yabanqolobi, ubuqhetseba besazisi; okanye umthengi ofaka isixa esingaqhelekanga semali- kufuneka anike ingxelo ngeziphumo zawo kumlawuli.
Ezi brokers ziyafuneka ukuba zibonise ukuqonda okucacileyo ngokubaluleka kokwenza 'iprofayili yomngcipheko wabathengi' yomrhwebi ngamnye. Oku ukongeza ekwenzeni ukukhangela indawo rhoqo kubathengi.
Bonke abathengisi beCySEC bayacelwa ukuba banxibelelane yonke imirhumo emayiyihlawulwe ngabathengi, ngokungafihlisiyo ngokupheleleyo. Inkampani kufuneka ivelise 'isaziso' esinobuchule, esidwelise ngokweenkcukacha ukuba izakuthathwa nini iifemi yomthengisi weCySEC. Oku kunjalo ngakumbi kwi-CFDs
Elinye icandelo lokuxela umngcipheko 'kukuqinisekiswa kwabathengi'. Kwigama lokungafihli kunye nokuqonda into echaziweyo, abathengi kufuneka bagcwalise ifom yokuqinisekisa. Oku kubalulekile ukuqinisekisa ukuba 'isaziso solwazi' sanikezelwa yi-CySEC broker, kwaye yaqondwa ngumthengi.
Omnye umqathango wokudibana nabarhwebi beCySEC xa besenza isicelo sephepha-mvume lophicotho-zincwadi olwenziwa minyaka le kunye nokungeniswa kweengxelo. Iingxelo eziphicothiweyo ngokubanzi kufuneka zifayilishwe nge-30 kaJuni kunyaka ophelileyo yile khomishini.
Iinkcukacha zomrhwebi ngamnye zinolwazi oluphambili njengenzuzo epheleleyo, ubungqina bemirhumo yonyaka ehlawulwe kwi-CySEC, ivolumu yokuthengisa, kunye neefom zokubala iifizi zonyaka. Olu luphando olunzulu, kwaye uninzi lwababoneleli beenkonzo zezezimali bazisa abaphicothi zincwadi besithathu ukuba bancede. Uphicotho-zincwadi olupapashiweyo kufuneka lubandakanye yonke imali kunye neeasethi eziphantsi kwenkampani.
Kutshanje phantsi kwemithetho emitsha engeniswe kwi-2018, ikhomishini ithi zonke iifemu zezemali kufuneka zibonelele ngokophuka komntu kunye neenkcukacha. Oku kubandakanya; Amanani asezantsi eeasethi, zonke izinto zorhwebo ezenziweyo ngaloo nyaka, kunye nabathengi ababengabatyali mali abaqeqeshiweyo kunye nabathengisi.
Ingxelo kufuneka ibandakanye urhwebo lwangaphandle iingxelo kunye noluphi uhlobo olusetyenzisiweyo. Umrhwebi kufuneka ahlule ngokucacileyo phakathi kweentengiso zentengiso ezenziwa ngumthengi, kunye nezo zenziwe ngumthengisi egameni lomthengi.
Ukuba naluphi na ulwazi lushiywe ngaphandle kolu phicotho-zincwadi lonyaka, umthengisi weCySEC uya kubethwa isohlwayo, okanye okubi ngakumbi - irhoxisiwe ilayisensi.
Ukwahlula-hlulwa kweakhawunti yebhanki, ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba kukwahlula imali, ayisiyonto intsha-ngakumbi kwicandelo leenkonzo zezemali. Kwi-CySEC, lo mthetho usebenze kuphela ngo-2017. Umthetho ngoku uthi nayiphi na inkampani yotyalo-mali ephethe imali engabathengi bayo kufuneka ikhusele imali yabathengi, kude neyayo.
Ngaphandle koku, kufuneka baqinisekise ukuba iimali zeakhawunti yakho azixutywanga nezayo (zamatyala njl.njl. Isigwebo sikhusela ulwazi lwakho lomntu siqu ukuba lungangeni kwizandla ezingezizo.
Ngokwe-CySEC, iifemu zabarhwebi kufuneka 'zahlule imali' ubuncinci kwiiyunithi ezi-3 kwiyunithi nganye ye-1,000 XNUMX efakwa ngumthengi. Oku kufuna ukuba kwiakhawunti eyahlukileyo ngokupheleleyo kuleyo yomthengisi. Ngokwenza oku, unokuqiniseka ukuba ukuba umthengisi ngelishwa uphumile kwishishini, imali yakho ikhuselekile.
Kufuneka kuthiwe ngelixa i-FCA ibonelela ngembuyekezo yabathengi ukuya kuthi ga kwi-85,000, i-CySEC iya kubuyekeza kuphela i-20,000. Oku kusengcono kunanto, kodwa siza kungena kwiinkcukacha ezithe kratya kungekudala.
Ukukhuthala okubalulekileyo kubalulekile kubarhwebi beCySEC. Oku kubandakanya ukujongwa kweenkcukacha zangasemva kubo bonke abathengi abatsha, kubandakanya neenkampani zangaphandle. Le nkqubo yokuqina yenkuthalo kufuneka ibandakanywe kwiziseko zomzi-mveliso webroker. Abarhwebi beCySEC bahlala bephantsi koviwo. Emva kwayo yonke loo nto, imizimba elawulayo ngokuyintloko ifana neenqwelomoya-ke kufuneka baqhube inqanawa exineneyo. Yiyo loo nto-zonke iirekhodi zemali kufuneka ziphononongwe ngocoselelo.
Sitshilo ngaphambili ukuba ukuba umthengi utyala imali enkulu ngesiquphe, umrhwebi kufuneka ayixele. Ukongeza koku, kufuneka baqhubeke nengxelo yenkuthalo efanelekileyo. Ingxelo kufuneka ibandakanye naziphi na iziphumo zophando ezinjengokuba yayifunyenwe phi imali.
Kwakhona, konke oku kuyinxalenye yothintelo lolwaphulo-mthetho lwezezimali kunye nokusetyenziswa gwenxa kwemali ngaphakathi kwisithuba semali, eyayiyingxaki enkulu kakhulu ngaphambi kokuba umgaqo onzima ube yinto eqhelekileyo.
Kwakukho ixesha apho iqonga lomthengisi linokubonelela abatyali mali kangange-1: 1000 yokunyusa urhwebo. Ipesenti encinci yabarhwebi abanebhalansi enkulu yebhanki banokufumana olo hlobo lomngcipheko. Kodwa, kubantu abaninzi, ilinga kakhulu kwaye inokuphela ngokulula kwintlekele.
Ayisiyiyo kuphela indawo ephezulu yokucacisa iakhawunti yakho ngokukhawuleza kodwa ipotifoliyo yakho inokonakaliswa kakubi, nayo. Ezo ntsuku zihambile, kungaphelelanga apho kuba i-CySEC inyanzelise ukuthintelwa kwabanikezeli beenkonzo zezezimali, ngokwemigaqo ye-ESMA.
Njengomthengi wentengiso, oku kuthetha ukuba uya kufakwa kule mida ilandelayo esekwe kwimpahla:
Iibini eziphambili zemali - 30: 1
Ii-indices ezinkulu, izibini zemali ezingezizo ezona ziphambili, igolide- 20: 1
Izinto zorhwebo (ngaphandle kwee-non-ezinkulu kunye negolide) - 10: 1
Amanye amaxabiso esalathiso kunye namashishini alinganayo - 5: 1
Imali yedatha - 2: 1
Ewe kunjalo, xa unokufumana amandla, kuninzi ekufuneka uphulukene nako. Kodwa, kwelinye icala, ukuba ihamba ngendlela yakho, unokuma ukuze ufumane okuninzi. Into ebalulekileyo kukutyala imali kuphela kwiiparamitha zebhajethi yakho.
Zithini Izikhuselo ezenziwa nguMgaqo-nkqubo weCCSE?
I Fund'Investor yeMbuyekezo ', okanye ICF zexesha elifutshane, yasekwa ngowe-2004 kwaye ilawulwa yi CySEC. All CySEC abarhwebi anyanzelekile ngokusemthethweni ukuba bathathe inxaxheba ICF yaye ngenxa yoko, i-akhawunti yakho ikhuselwe ukuya kwenye I-20,000 yamawaka i-90% yeefizi ezihlanganisiweyo zifunyenwe Amabango.
Umzekelo womzekelo ongumzekelo - masithi siyabambelelaUmthetho we-Ofisifumana i-4,500 € (90%).
Zombini i-CSSE kunye ne-FCA i-FCA iyimithetho futhi i-e-e-e-e-i-e-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-yayo yayiyi-XNUMXyeyiphi into ebalulekile kakhulu eyimfuneko yewotshi? `` '' 'iwotshi yokujonga ``' 'eyindawo yezemali eyezindawo zezentengiselwano, ‘Elicandelo leqhezu elithatha izinqumo.zamkelekile. Ukuba ungathanda ukwazi ukuba yeyiphi na imida yokubekeka ekhoyo kwiiasethi zakho ozikhethileyo, uya kubona uluhlu lweebhulethi ngaphezulu kweli phepha.
Zeziphi iiAssetsheyiti zeCySEC \_ Brokers> ezivumela ukuba wena ube ngumrhwebi?
Akukho mabini eeCySEC's Brokers afanayo, ngelixa abanye banokuthi bagxile kwizitokhwe kuphela, abanye banikezela ngodidi lweeasethi onokucinga ngazo. Ngale nto engqondweni, sidibanise uluhlu lwee-asethi ezibonakalayo zibonelelwa ngabarhwebi beCySEC.
Utshintshiselwano lwangaphandle lolona rhwebo lulwelo kulomhlaba. Ngeso sizathu, uyakufumanisa ukuba uninzi lweeCySEC's brokers zibonelela Forex yorhwebo. Ukufikelela kule marike yehlabathi, kuya kufuneka ubhalise kumrhwebi ukuze uqale ukubeka iiodolo.
Ngokwenza njalo, uyakwazi ukurhweba ngababini bemali njenge-EUR / USD okanye i-GBP / i-USD- iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Xa kufikwa kwizibini zemali, zintathu iintlobo ezahlukeneyo; ubukhulu, abantwana, kunye ne-exotics.
Apha ngezantsi kukho inkcazo emfutshane nganye (ukuba kunokwenzeka ukuba umtsha kwi-forex).
Izibini ezincinci: Abanye kuluntu lokurhweba babiza ngababini abancinci 'ngemali-enqamlezileyo'. Uphawu lwezi zibini kukuba azinakuze zibandakanyeke kwiDola yaseMelika. Eminye imizekelo ibandakanya i-EUR / GBP, i-GBP / JPY kunye ne-CHF / JPY (ukubiza ezimbalwa)
Izibini ezibini: Izibini eziphambili zezona ziphakamileyo kwimfuno kwaye ke lolona hlobo lulwelo. Imizekelo ibandakanya i-AUD / USD, i-EUR / i-USD, kunye ne-GBP / i-USD (zininzi ngakumbi). Ezi zibini zingathengiswa nangaliphi na ixesha kwimarike ye-forex kwaye rhoqo kunokuba zingasasazeki.
Izibini ezingaqhelekanga: Ezi zibini ze-forex azithengiswanga phantse rhoqo njengoko ezinye zimbini zikhankanyiwe-ziya kuza ziphezulu kakhulu sasaza. Imizekelo yezibini ezingaqhelekanga ibandakanya; I-GBP / ZAR, i-EUR / i-TRY kunye ne-USD / HKD (zininzi izinto onokukhetha kuzo)
Abanye abathengisi beCySEC bangcono kunabanye, ke kuhlala kucetyiswa ukuba uzame ukufumana umrhwebi ngezixhobo ezininzi zemfundo, kunye neemfumba zezalathi. Zombini zibalulekile ekuphumeleleni kwiimarike zeFX.
Ikhontrakthi iyantlukwano umahluko (CFDs)
Ii-CFD ziyindlela efanelekileyo yokuzama ukumisela ukuhamba kwezixhobo ezahlukeneyo. Umzekelo, iimali, izitokhwe, ii-indices okanye izinto zorhwebo. Masicinge ukuba ukholelwa ukuba ixabiso lentengiso liyenyuka. Kule meko, uya 'kuhamba ixesha elide' okanye 'uthenge'.
Ukuba, nangona kunjalo, ucinga ukuba ixabiso lentengiso liza kuhla ngexabiso, 'unganqumlela' okanye 'uthengise'. Nokuba yeyiphi na indlela, abathengisi beCFD abanazo izinto zexabiso. Nangona kunjalo, ii-CFD ziyakuvumela ukuba ulungelelanise ixabiso leasethi yenkampani (umzekelo isitokhwe seApple) ngexesha langempela. Oku kuthetha ukuba njengomrhwebi uyakwazi ukwenza inzuzo ngokuhamba kwamaxabiso.
Ngokubanzi, akukho khomishini ihlawuliswe ii-CFDs kwaye abarhwebi banokufumana ukufikelela kubungakanani-ngaphakathi kwemida exoxwe ngaphambili ye-ESMA.
Imakethi yempahla ivulekile iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ukurhweba ngempahla kuthathwa njengokutsala ngokwenene kubarhwebi abafuna ukungazinzi. Ngapha koko, abanye abatyali mali abasisigxina bakhetha ukurhweba kuphela kolu didi lweeasethi.
Le asethi inokwahlulwa ibe ngamaqela ahlukeneyo, kodwa ukwenza izinto zibe lula siza kudwelisa ngokwamahlelo amabini - 'izinto ezinqabileyo' kunye 'nezinto ezithengiswayo ezithambileyo':
Izinto ezilukhuni zezi zilandelayo:
IAluminiyam, ubhedu, isilivere, igolide, ipalladium
Ilothe, inkcenkce, i-zinc, i-nickel, iplatinam
I-oyile eluhlaza, i-oyile yegesi, i-oyile yokufudumeza,
Ipetroli engenanto, irhasi yendalo
Iimveliso ezithambileyo zezi zilandelayo:
Irhasi, oats, irayisi, umbona
Ioyile yesoya, icanola
Uboya, umqhaphu, irabha
Iinyama zehagu, iinkomo eziphilayo
Ukuncitshiswa kwemilinganiselo ye-inshorensi kwindawo yezinto, izinto ezinemigaqo kwaye zilandelwe ngabo bonke abarhwebi beCySEC. Umzekelo, i-inshurensi yomthetho okwangoku okwangoku imilenze yomgaqo: 1: 20igolide kunye ne-1: i-10 enye indawo yezindlu
Ukutyala imali kunye nokurhweba kwimpahla yorhwebo kungayinyusa ipotifoliyo yakho. Xa sele uyitshilo loo nto, kubaluleke kakhulu ukuba ube nokuqonda kakuhle ukuba intengiso isebenza njani ngaphambi kokuzibophelela, kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa.
Kulula nje, isabelo sokujongana yenza abathengisi bakwazi ukuthenga nokuthengisa izabelo kumashishini nakwimibutho yabucala (cinga iNike okanye iFacebook). Zonke iinkampani ezikhoyo onokuthi utyale imali kuzo zidweliswe esidlangalaleni, oko kuthetha ukuba ungathengisa izabelo zakho kutshintshiselwano olo.
Awuthintelwanga ekuthengeni isitokhwe esinye, kwaye akufuneki uthenge yonke. Malunga nokugqibela, oku kungenxa yokuba abanye abathengi beCySec ngoku bayakuvumela ukuba ubandakanyeke 'kubunini obunqabileyo'. Njengoko igama libonisa, oku kuthetha ukuba ungathenga 'iqhezu' lesabelo.
Zintathu iintlobo eziphambili zabarhwebi kwesi sithuba kwaye zezi zilandelayo:
Umrhwebi wokwenza- Umkhondo usegama neli. Olu hlobo lomsebenzi webroker kukwenza ii-odolo njengoko kuyalelwe nina, ngaphandle kongenelelo okanye iingcebiso.
Umthengisi weNgcebiso- Olu hlobo lomthengisi weCySEC luyakukucebisa nakweyiphi na izabelo onokufumana inzuzo kuyo, okanye ulungelele iphothifoliyo yakho. Nokuba uyathenga okanye awuthengi, umnxeba wakho awukho kwaphela.
Umrhwebi oQhelileyo - Ukuba uyathanda ukurhweba ngamasheya kunye nokwabelana ngokungathathi ntweni, ke umrhwebi onokukhetha ukuba kunokwenzeka abe yile nto uyifunayo. Olu hlobo lwenkampani yomrhwebi luya kwenza zonke izigqibo zorhwebo kuwe, kunye nenkonzo yokuphela kokugqibela ukuba uyafuna.
Kodwa khumbula, xa kufikwa kubathengi abathengisayo, ngawo wonke loo msebenzi ungaphezulu uza kuza nemirhumo eyongezelelweyo. Soloko ujonga imigaqo kunye neemeko kunye neefizi ezilindelweyo.
Uluvo olusisiseko lokuthengisa olu didi lweeasethi kukuqikelela ukunyuka kwamaxabiso kuthengiso olubanzi lwesitokhwe. Umahluko phakathi kwale nto kunye nezinye iiasethi, ezinje ngesitokhwe, kukuba abatyali mali abanakuthenga i-asethi ngokwayo. Izalathiso zibophelelekile ekulandeleleni ukuhamba kwezabelo ezininzi ezisebenza kutshintshiselwano oluthile.
Iimpawu zilinganiswa ngokusebenzisa amanqaku endaweni yeepawundi okanye iidola. Ngapha koko, kufuneka bathengiswe ngee-CFD, ikamva okanye ii-ETFs. Abathengisi beCySEC banikezela ngenkxaso kwii-indices eziphambili ezinje nge-FTSE 100, NASDAQ 100, kunye noDow Jones 30.
I-Cryptocurrencies ifumene ingqalelo enkulu kule minyaka idlulileyo, kunye neBitcoin yeyona mali idumileyo yolu hlobo. Ukuze urhwebe ngeemali ze-cryptocurrencies, kufuneka umisele kwangaphambili ngokuchanekileyo ukunyuka okanye ukuwa kwesibini esithile. Ngale ndlela, oku kusebenza kakhulu njenge-forex.
Nangona kunjalo, ii-cryptocurrensets zezinye izinto ezinokuthengiswa ezingafuni ubunini. Ukuba kunjalo, ufuna ukuba neengqekembe, ungazithenga ngokusebenzisa umrhwebi onje nge-eToro.
Nazi ezinye zee-cryptocurrensets ezaziwa kakhulu ukuba abathengi beCySEC bakuvumela ukuba urhwebe:
Ngaphambi kokuba uqale ukurhweba ngee-cryptocurrensets kwiakhawunti yomthengisi weCySEC, kuyacetyiswa ukuba uzame idemo okanye uvavanyo ukuze ubone ukuba le nkundla isebenza njani kwaye zeziphi iimali ezilungele wena.
Ungabafumana njani abathengisi beCySEC abagqwesileyo?
Emngciphekweni wokuchaza okucacileyo, kubaluleke kakhulu ukuba uqale ngomthengisi onelayisensi epheleleyo ngumzimba olawulayo- njengeCySEC.
Oku kuqinisekisa ukuba unokuyithemba ngokupheleleyo inkampani kungekuphela kweyakho imali -Kodwa nenkcukacha zakho. Ungayichazanga eyokuba, ngabarhwebi beCySEC iimali zakho zikhuselwe ngokwahlulwa kwemali, ukongeza kwimbuyekezo ukuya kuthi ga kwi-20,000 (okanye i-90% yeakhawunti yakho, nokuba yeyiphi encinci).
Zininzi ii-brokers zakho kwi-Intanethi- ke kunokuba nzima ukwazi ukuba ungaqala phi. Ngale nto engqondweni, sidibanise uluhlu lweemetrikhi ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe kukhangelo lwakho lomthengisi weCySEC
Imirhumo ehlawuliswa ngabarhwebi inokwahluka ngokumasikizi, ke ngenene kuya kufuneka wenze uphando ukuthelekisa kunye nokuthelekisa. Amanye amaqonga awanayo nayiphi na intlawulo yekhomishini konke konke (njenge-eToro), ngelixa amanye ehlawulisa ipesenti esele igqityiwe kuyo yonke i-odolo eyenziweyo.
Musa ukudimazeka ukuba kuya kufuneka uhlawule umrhumo, njengoko uninzi lweenkampani ezinkulu zabarhwebi zihlawulisa iikhomishini ukuhlawula iindleko zokubonelela ngenkonzo ejikeleze konke. Njengomzekelo, masithi uthengisa i-EUR / USD kwaye umrhwebi wakho ubiza i-0.4% ikhomishini. Emva koko, utyale i- £ 1k kweso sibini semali. Kule meko, uya kuhlawula umthengisi wakho nge- $ 4 kwimirhumo yekhomishini.
Ukusasazeka kubaluleke kakhulu xa kuthengiswa kwi-Intanethi. Ukubeka ngokulula, ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa leasethi (elinganiswe kuyo iipipi).
Umzekelo, masicinge 'ukusasazeka' kwe-EUR / USD ziipips ze-3. Kananjalo, kuya kufuneka ulonyuse utyalo-mali ngeepipi ezi-3 ukuze uzophule.
Izixhobo zokuFunda nokuThengisa
Abarhwebi abanamaxesha baya kuzisebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kunye neenkonzo ukubanceda ukuba baqikelele ukuba yeyiphi na iasethi yezemali enokuthi ihambe. Oku kukwaqinisekisa ukuba bayakwazi ukwenza isicwangciso abanaso engqondweni.
Ngale nto engqondweni, ezinye zeemetrikhi ezibaluleke kakhulu ekufuneka uzijongile xa ukhetha umrhwebi weCySEC zezi:
Isantya sokwenza iodolo- Abathengisi abaphambili beCySEC banokwenza iodolo phantse kungabikho xesha konke konke. Ngamanye amaxesha, oku kunokwenziwa kwi-millisecond. Inkqubo ixhomekeke kuhlobo luni lweakhawunti kunye nesicwangciso sokurhweba esisetyenziswayo, singasathethi ke ngobuntununtunu bexabiso.
Urhwebo oluzenzekelayo - Abanye abathengisi beCySEC baxhasa ngokupheleleyo isoftware ezenzekelayo njengabacebisi abaziingcali besithathu.
Idatha yezembali kunye nokuphila- Bathi amaxabiso entengo abuya ngeenxa zonke. Abanye abathengisi bafunga ngokufunda ngexabiso lembali ukuze baqikelele umkhondo wentengiso. Esi sixhobo sibalulekile xa kusenziwa uvavanyo lwasemva kwexesha kunye nohlalutyo lobuchwephesha njengenxalenye yesicwangciso esikhulu.
Iitshathi kunye nezalathi- Izikhombisi zobuchwephesha zibonisa abathengisi ukuba yeyiphi imeko yentengiso ngokusebenzisa iitshathi zamaxabiso zeentlobo ezahlukeneyo. Bona ngezantsi.
Njengoko besesitshilo, ukuhambisa izikhombisi zobuchwephesha kunye neetshathi zamaxabiso yindlela entle yokulandela ngokukuko okwenzekayo kwiimarike.
Ezinye zezona zikhombisi zithandwa ngabarhwebi zezi:
I-Index yeDirectional Index (ADX)
I-intanethi ixinene nezixhobo zemfundo ezichaza ukuba isalathiso sobuchwephesha ngasinye sisebenza njani, kwaye ungazisebenzisela inzuzo yakho.
Ngaphambi kokuba uzibophelele ngokupheleleyo kumthengisi weCySEC, kubalulekile ukuba uyazi ukuba zeziphi iintlobo zeeasethi ezikhoyo kuwe. Unokuba nomdla kuphela ekuthengiseni i-cryptocurrensets okwangoku, kodwa kamva ezantsi emgceni, unokufuna ukwahlula iphothifoliyo yakho yorhwebo kwaye ungeze ezinye iiklasi zeaseti kuluhlu lwakho.
Ukuba ujolise ikakhulu kurhwebo lwe-forex, ke kubaluleke kakhulu ukuba ujonge ukuba zeziphi izibini zemali ezikhoyo kwiziko lomthengisi ojonge kulo. Isizathu sokuba, amanye amaqonga abonisa kuphela izibini ezahlukeneyo zemali ngelixa ezinye zinikezela ngaphezulu kwekhulu.
Ukuzifumanela umrhwebi weCySEC oneeklasi ezininzi zeeasethi kuthintela isidingo sokuvula iiakhawunti ngamaqonga amaninzi. Emva kwayo yonke loo nto, kwimeko apho utshintsha umkhombandlela weqhinga, unazo zonke izinto phantsi kophahla olunye.
Inkqubo yedipozithi kunye nokurhoxa iyahluka phakathi kweqonga labarhwebi beCySEC. Uninzi lubonelela ngeendlela ezifanayo zediphozithi, kodwa ukuba ufuna ukufaka imali usebenzisa indlela ethile kufuneka ujonge ukuba iyayamkela.
Ezona nkqubo zibalaseleyo zabarhwebi beCySEC zokurhoxa ngokukhawuleza, okanye ubuncinci ngaphakathi kweeyure ezimbalwa. Xa sele uthethile, oku kungahluka ngokuxhomekeka kweliphi iqonga olisebenzisayo. Zonke iinkampani ezinamava ezorhwebo ziya kuthi zichaze inkqubo yokufaka kunye nokurhoxisa ngokwemiqathango yewebhusayithi efanelekileyo.
Nceda uqaphele ukuba ixesha elithathwayo lokuhlawula ukufikelela kwiakhawunti yakho linokuxhomekeka ekubeni yeyiphi indlela yokuhlawula ogqiba ekubeni uyisebenzise. Umzekelo ogqibeleleyo woku kukudluliselwa kwebhanki yocingo, enokuthatha malunga neveki. Oku ngokucacileyo akulunganga ukuba ufuna ukuqala ukurhweba kwangoko.
Inqanaba lenkonzo yabathengi ebonelelwa nayiphi na inkampani ibaluleke kakhulu, kwaye oku kubaluleke ngakumbi kurhwebo. Inkonzo yabathengi enomdla inokukhokelela ekubeni abatyali mali bashiywe bephezulu kwaye bomile ngexesha labo lokudinga.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ujonge i-24/7 inkonzo yabathengi, kunye neendlela ezahlukeneyo ezinje ngengxoxo ebukhoma, i-imeyile, umnxeba kunye nefom yoqhakamshelwano. Khumbula nangona, ukuba uthengisa nge-forex, i-cryptocurrensets, okanye izinto zorhwebo- ezi ntengiso zisebenza nge-24/7.
Ke, ukuba ubhalisela umthengisi weCySEC ngenkonzo yabathengi ekunikezeleni ngeentsuku ezi-5 ngeveki- awuzukufumana noncedo apho ngeempelaveki.
Nokuba uyi-newbie epheleleyo okanye uyingcali kwezorhwebo, kuhlala kulungile ukuba ukhethe kwaye wazi okufumanekayo.
Umzekelo, abanye abathengi beCySEC banikezela ngeAkhawunti yamaSilamsi kubalandeli benkolo yamaSilamsi. Ezi akhawunti ziye zatshintshwa ukuze kuqinisekiswe ukuba zihlala zihlonipha umthetho weSharia ochasene nenzala (zombini ezihlawulweyo kunye nezityala). Ngenxa yoko, ezi akhawunti azihlawuli okanye zifumane nzala.
Ukuba ungumlandeli wenkolo yamaSilamsi kwaye usokola ukufumana umrhwebi-kufanelekile ukuba unxibelelane neqonga. Ngokwenza njalo, unokufumanisa ukuba umrhwebi uyakwazi ukukulungiselela oku.
Ngokufanayo, ukuba unomdla kurhwebo ngexabiso elincinci-emva koko unokufuna ukujonga kwi-mini (0.10pips), micro (0.01pips) kunye nano (0.001pips) akhawunti. Nokuba ezi akhawunti azibhengezwanga eqongeni, abathengisi abaphambili beCySEC baya kuxhasa ubuncinci bezorhwebo.
Ukuba kunokwenzeka unomdla kurhwebo oluzenzekelayo (umzekelo - Ii-EAs zangaphambiliemva koko kuyakufuneka ujonge ukuba umthengisi wakho weCySEC uyawaxhasa amaqonga omntu wesithathu anje MT4. Ukuba ungathanda ukuphucula ipotifoliyo yakho ngokusebenzisa amaqonga ambalwa ahlukeneyo, qiniseka ukuba umthengisi wakho unokukufumana oku.
Qalisa nge-CySEC Broker namhlanje
Okwangoku, kuya kufuneka ubenolwazi olululo lwento yonke oyifunayo malunga nabarhwebi beCySEC. Ukuba awukazichazi ukuba ngowuphi umrhwebi ofanele iimfuno zakho zokurhweba, nceda ke ufumane uluhlu lwethu lwabathengi beCySEC abaphezulu.
Nangona kunjalo, ukuba are sikulungele ukuqalisa, emva koko sibeke inyathelo elilula ngesikhokelo samanyathelo ekufanele ukuba urhwebe ngaso kungekho xesha.
Inyathelo 1: Bhalisela iAkhawunti
Intloko kwi-broker oyikhethileyo kwaye ukhethe ukuvula iakhawunti. Kuya kufuneka unikeze uluhlu lweenkcukacha zakho kunye neenkcukacha zonxibelelwano. Kuya kufuneka uphinde ucacise ukuba ngawaphi amava orhwebo angaphambili onawo.
Inyathelo 2: Yazi uMthengi wakho (KYC)
Ngaphambi kokuba ukwazi ukuqala ukurhweba, kuya kufuneka uhambe ngenkqubo ye-KYC yomthengisi weCySEC. Ngokomgaqo weCySEC, bonke abarhwebi kulindeleke ngokusemthethweni ukuba 'bazi' abathengi babo. Oku kuthetha ukuba umrhwebi kufuneka aqinisekise ukuba ngubani umrhwebi ngamnye.
Ifemu yomrhwebi iyakufuna i-ID yakho yefoto (njengepaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba). Okulandelayo, inkampani iya kufuna uxwebhu olusandula ukukhutshwa olubonisa igama lakho nedilesi. Imizekelo ibandakanya into oyisebenzisayo okanye ingxelo yebhanki (kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo).
Iqonga liya kuthi emva koko licwangcise olu lwazi kwaye liqinisekise isazisi sakho ngaphambi kokuthumela i-imeyile yokuqinisekisa. Abathengisi abaphambili beCySEC banokukwenza oku kungaphelanga imizuzu.
Ngokukhawuleza ukuba ungubani uqinisekisiwe, ungaqhubeka wenze idipozithi.
Iindlela zokuhlawula ezikhoyo kubathengi beCySEC zihlala zibandakanya oku kulandelayo:
Ikhadi letyala / ledebhithi
ii-wallets, njengePayPal kunye neSkrill
Njengoko besitshilo, ukuba kuya kufuneka usebenzise indlela ethile yokuhlawula kwaye uqiniseke ukuba oku kuyenzeka ngaphambi kokuqala kwenkqubo yokubhalisa.
Isinyathelo 4: Qala ukuThengisa
Ukuba ufuna ukurhweba kwiimeko zentengiso yokwenyani kodwa ungakulungelanga ukusebenzisa imali yakho-zama iakhawunti yedemo! Iiakhawunti zedemo ziza ne-wad 'yephepha' lemali onokuthi uthengise ngayo. Oku kunokuba yi- $ 100,000, kodwa ihlala ijikeleze i-10,000 yeedola.
Iiakhawunti zedemo azigcinelwanga kuphela abathengisi abangenamava, kuba zilungile nakwizazi. Emva kwayo yonke loo nto, izibonelelo zedemo ziyindlela ebalaseleyo yokuvavanya iindlela zokutyalomali ezintsha. Iidemos kunye nezilingo ziya kukunceda uqhelane nendlela esebenza ngayo imakethi kwaye ikuncede xa uziqhelanisa nendlela yokufunda iitshathi kunye nezalathi zobugcisa.
Abona bahwebi beCySEC baBalaseleyo be2022
Sigubungele zonke izinto ezibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo xa ukhetha umthengisi weCySEC, kunye neendidi zeeklasi zeeasethi ezinikezelwayo.
Ukuba usadinga ukukhuthazwa, jonga uluhlu lwethu lweeCySEC brokers ezilungileyo ngoku.
1. I-Capital.com - iiKhomishini zeZero kunye nokusasazeka kwe-Ultra-Low
I-Capital.com yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB elawulwa yi-intanethi ye-broker enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Oku kubandakanya izitokhwe, i-forex, i-indices, kunye nempahla yorhwebo yee-CFDs. Kwakhona, izitokhwe zangempela zinikezelwa kwi-UK kunye namanye amazwe e-EU. Awuyi kuhlawula nepeni enye kwikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqine kakhulu. Amaziko okuphucula nawo ayanikezelwa - ahambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Kwakhona, oku kume ngo-1: 30 kwizibini ezibini ze-FX, 1:20 kwizibini ezincinci zeFX kunye negolide, 1: 10 kwii-indices kunye nezinto ezingezizo zegolide, i-1: 5 kwistokhwe, kunye ne-1: 2 kwii-crypto-asethi.
Ukufumana imali kwi-Capital.com kukwangumoya - njengoko iqonga lixhasa amakhadi ebhanki / okuthenga ngetyala, i-e-wallets, kunye nokudluliselwa kweakhawunti yebhanki. Eyona nto ingcono kakhulu, unokuqalisa nge-20 £/$ ngekhadi.
I-79.17% yee-akhawunti zokuthengisa ezithengisayo zilahlekelwa yimali xa zisasazeka ukubheja kunye / okanye ukuthengisa ii-CFD kunye nalo mnikezeli. Kuya kufuneka uqwalasele ukuba unako na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali yakho.
Imali yakho eyinkunzi isemngciphekweni xa uthengisa ii-CFD kunye nalo mboneleli
Njengoko igama libonisa, i-EuropeFX yingcali ye-forex broker. Ngale nto ithethwayo, iqonga likwaxhasa iiCFD ngohlobo lwezabelo, ii-indices, ii-cryptocurrensets kunye nezinto zorhwebo. Uyakwazi ukuthengisa nge-MT4, ukuze ukhethe kwisoftware yedesktop, okanye usetyenziso lweselfowuni / lweethebhulethi.
Ukuba ufuna ukurhweba ngebrawuza yakho esemgangathweni, umrhwebi ukwabonelela ngeqonga lakhe lendalo- i-EuroTrader 2.0. Ngokwentlawulo, iYurophuFX ibonelela ngokusasazeka okuxineneyo kwizibini eziphambili. Imali yakho ikhuselekile ngalo lonke ixesha, ubuncinci kuba umrhwebi ugunyazisiwe kwaye unelayisensi yiCySEC.
Kukho amawaka wabarhwebi kwindawo ekwi-Intanethi, bonke abanomdla wokutsala abatyali zimali kumaqonga abo. Ingxaki iya kuhlala ikhona iingcuka ezambethe ufele lwegusha kushishino lwezezimali.
Kungenxa yoko le nto kubaluleke kangaka ukuba ubeke imali yakho kulawulo lomrhwebi olulawulwa ngokupheleleyo. Ngale nto, sithetha umntu ophethe iphepha-mvume kumzimba othembekileyo njengeCySEC. Le kuphela kwendlela onokuthi uqinisekise ngayo ukuba ukhuseleko kumnini weefemu zabarhwebi abanganyanisekanga.
Abarhwebi esidwelise apha ngasentla bonke banelayisensi ngokupheleleyo yiCySEC kwaye bayaziwa. Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka wenze olwakho uphando xa ukhetha umrhwebi ukuze anyamekele imisebenzi yakho.
Kuya kufuneka ujonge kwiimpawu ezibalulekileyo ezinje ngokusasazeka, amandla, ikhomishini, kunye nentlawulo yokuthenga. Zonke ezi zinto zidibeneyo ziya kukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona broker ifanelekileyo kuwe. Kwakhona, ungalibali ixabiso lokusebenzisa iiakhawunti zedemo kunye neemvavanyo zasimahla ukuze wazi iqonga ngaphambi kokuchitha imali oyisebenzele nzima.
I-CySEC imele ntoni?
I-CySEC sisichazi 'seKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano' - eliqumrhu elilawulayo kwiRiphabhlikhi yaseCyprus, egcina iso kwishishini lezemali
Ndingayisebenzisa into yokuhambisa ngocingo ebhankini ukuze ndibeke iakhawunti yam yomthengisi weCySEC?
Unako uninzi lweefemu zabarhwebi beCySEC. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ugqithiso lwebhanki yemveli yenye yeendlela zokuhlawula ezicothayo.
Ndidinga ipasipoti yokuvula iakhawunti yomthengisi weCySEC?
Udinga uhlobo oluthile lwesazisi sefoto, uninzi lwamaqonga afuna ipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Ngaphezulu koko, kuyakufuneka uthumele ikopi yoxwebhu olusemthethweni njengebhili yokusetyenziswa (ukusuka kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo).
Ukuba umthengisi wam we-CySEC uyahamba, ngaba ndiza kuphulukana nayo yonke imali yam?
Yeyiphi i-CySEC broker efanelekileyo yabaqalayo
Owona mthengisi ubalaseleyo weCySEC wokurhweba ngabantu abatsha yiCapital.com. Oku kungenxa yokuba iqonga lilula ukuhamba kwaye likuvumela ukuba uthengise ngeemali ezincinci.